Ahoana ny fampifandraisana ny Alexa amin'ny jiro 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Ny jiro marani-tsaina dia tsy isalasalana fa ny dingana voalohany hitondrana mody any an-trano ny fiheverana ny mandeha ho azy ao an-trano, izany hoe ny fanaraha-maso (na dia miaraka amin'ny alàlan'ny baiko am-peo) an'ireo fitaovana elektrika rehetra aza. Raha nanapa-kevitra ny hividy takamoa maranitra iray na maromaro izahay ary tianay hofehezina amin'ny alàlan'ny baikon'ny feo natolotry ny Amazon Echo sy Alexa, amin'ity torolàlana ity dia hasehonay anao ny fomba fampifandraisana an'i Alexa amin'ny jiro sy ny baikon'ny feo azontsika ampiasaina aminy.
Amin'ny maha toko iray anay dia hasehonay anao izay jiro marani-tsaina tena mifanaraka amin'ny Alexa sy Amazon Echo, hahazoana antoka fa azonao atao tsara ny manefy ny baikon'ny feo ho azy ireo.
VAKIO IHANY: Amazon Alexa: Ahoana ny fomba hamoronana rindra sy ny baiko vaovaon'ny feo
Jiro sy plug dia mifanaraka amin'ny Amazon Alexa
Alohan'ny hanaovantsika na inona na inona amin'ny baiko am-peo, dia mila maka antoka isika fa mifanaraka amin'ny Alexa ny jiro marani-tsaina; raha tsy izany dia tsy ho azontsika atao ny manampy azy ireo amin'ny rafitra sy mifehy azy ireo lavitra. Raha efa nividy jiro marani-tsaina isika dia hizaha raha toa ny "mifanaraka amin'ny Amazon Alexa" na "mifanaraka amin'ny Amazon Echo" voalaza ao amin'ny fonosana na ao amin'ilay boky.
Raha tsy manana jiro na jiro mifanentana aminy isika dia mety hieritreritra ny hividy jiro Jiro LED mifanentana amin'ny Alexa, toy ireo maodely voalaza etsy ambany.
Bulb TP-Link KL110 Wi-Fi E27, miasa miaraka amin'i Amazon Alexa (€ 14)
Volam-bolo maranitra, bolam-by LOFTer E27 RGB 7W WiFi (€ 16)
Bulb Smart E27 AISIRER (tapa-2, € 2)
TKOIN E27 multicolor azo haingo manjelanjelatra (49 €)
Raha toa ka te-hampiasa indray ny jiro efa ananantsika isika (tsy misy mifanentana) dia azontsika atao koa ny mieritreritra ny mividy adaptatera marani-tsaina ho an'ny jiro, toy ilay atolotry ny socket Smart WiFi E27 Light, Aicase Intelligent WLAN (€ 29).
Te hampifanaraka ny jiro ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny na efitrano fandraisam-bahiny ve isika (ireo izay misy plug-in manokana)? Amin'ity tranga ity, afaka mamonjy amin'ny fividianana jirony maranitra isika amin'ny alàlan'ny fifantohana amin'ny faladiany Wi-Fi marani-tsaina, toy ireo voalaza etsy ambany.
Sokajy herinaratra Philips Hue (€ 41)
Sokajy Wi-Fi TP-Link HS110 miaraka amin'ny fanaraha-maso angovo (€ 29)
Smart Plug WiFi plug plug Smart Power Power plug (farantsa 4, € 20)
Ny vokatra rehetra voatanisa dia mifanaraka amin'ny Alexa, ny hany tokony ataontsika dia ny mampifandray azy ireo amin'ny tamba-jotra Wi-Fi (manaraka ny torolàlana ao amin'ny boky torolàlana ho an'ny mpampiasa), mampiasa ny fampiharana tsirairay hanamboarana fidirana lavitra (angatahina izahay hamorona kaonty vaovao ) ary, aorian'ity fanamboarana fototra ity ihany, dia afaka miroso amin'ny setup Alexa isika.
Ampifandraiso amin'ny Amazon Alexa ny jiro
Aorian'ny fampifandraisana ireo takamoa marani-tsaina (na plug na adapter voalaza) ary ampifandraisina tsara amin'ny tamba-jotra Wi-Fi ao an-trano, andao haka smartphone isika ary hametraka ny fampiharana Amazon Alexa, azo alaina ho an'ny Android sy iOS.
Aorian'ny fisintomana ilay rindrambaiko, alefaso izany ary midira amin'ny kaontinay Amazon. Raha mbola tsy manana kaonty Amazon isika dia afaka mamorona iray haingana ao anaty ny app na amin'ny tranokala ofisialy.
Aorian'ny fisoratana anarana dia tsindrio fitaovana Ao amin'ny ankavanana ambany, safidio ny bokotra + eo ankavanana ambony ary tsindrio Ampio fitaovana. Ao amin'ny efijery vaovao dia misafidy ny safidy arakaraka ny karazana fitaovana hampiendrehana azy isika: Jiro ny manamboatra jiro matsilo; Ny gazety raha toa ka manana plug-na marani-tsaina na Change raha toa ka nisafidy ny adapter Wi-Fi ho an'ny jiro tokana isika.
Andao hiditra Inona ilay marika ?, mifantina ny marika amin'ny fitaovantsika izahay, mifidy ny bokotra Tohizo fa tsara avy eo isika mikasika ny singa Azo ampiasaina; Ankehitriny dia angatahina amintsika ny fahazoan-dàlana hiditra amin'ny serivisy mifandraika amin'ny jiro, kitapo na switch novidiana (araka ny hita tao amin'ny toko teo aloha). Vantany vao niditra ny mari-pahaizana marina ianao dia safidio fotsiny Rohy izao hanisy fifehezana fitaovana ao anatiny Alexa.
Raha miseho ny marika an'ny fitaovana dia afaka mikitika foana isika iray hafa ary ampifanaraho amin'ny tanana ny fitaovana, mba hiseho ao anatin'ny Alexa. Aorian'ny fampifandraisana dia tsy mila misafidy anarana ho an'ilay fitaovana fotsiny isika, izay efitrano na sokajy anaovana azy no mampiditra azy (lakozia, efitrano fandraisam-bahiny, sns.) Ary kitiho ny vita.
Amin'ny toko manaraka dia hasehoko anao ny fomba fampiasana baiko amin'ny feo hifehy ny jiro Alexa.
Baiko amin'ny feo hitantana ny jiro
Aorian'ny fampidirana ireo fitaovana rehetra amin'ny app Alexa dia afaka mampiasa baiko am-peo avy amin'ny app Alexa na amin'ny Amazon Echo napetraka miaraka amin'ny kaonty Amazon mitovy ampiasaina amin'ny fananganana.
Ity misy lisitr'ireo baiko azontsika ampiasaina hitantanana jiro amin'ny Alexa:
"Alexa, mampirehitra jiro [stanza]"
"Alexa, velomy [fitaovana nome]"
"Alexa, ampidiro ny jiro rehetra ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny"
"Alexa, vonoy ny jiro rehetra ao an-trano"
"Alexa, andrehitra jiro amin'ny efitrano fandraisam-bahiny amin'ny 6 hariva"
"Alexa, fohazy aho amin'ny 8 alina ary ampireheto ny jiro rehetra ao an-trano"
Santionany amin'ny sasany amin'ireo baikon'ny feo azontsika ampiasaina ity rehefa apetraka amin'ny Alexa ny jiro. Ho fampahalalana bebe kokoa, manasa anao izahay hamaky ny torolalanay Endri-javatra amin'ny Amazon Echo, inona izany ho azy ary inona no izy.
Ny ampahany manan-danja amin'ny automatisation an-trano amin'ny ho avy dia ny fisian'ny jiro marani-tsaina izay azo fehezina amin'ny alàlan'ny mpanampy amin'ny feo toy ny Amazon Alexa, izay ahafahanao manana fifehezana faratampony amin'ireo fitaovana mifanaraka aminy.
Raha te hanao fanovana mitovy amin'ny Google Home izahay (ka araraoty ny fanararaotana ny Google Assistant) dia mamporisika anao izahay hamaky ny lahatsoratray amin'ny Inona no azon'ny Google Home atao: mpanampy amin'ny feo, mozika ary mandeha ho azy ao an-trano. Tsy azonao antoka izay hisafidianana an'i Amazon Alexa sy Google Home? Afaka mahita valiny maro amin'ny fanontanianao izahay amin'ny famakafakana lalindalina anay. Alexa na Google Home? fampitahana eo amin'ireo mpandaha-teny mahay sy mahay indrindra.
Inona no dikan'ny FWA, ny solon'ny fibre amin'ny Internet haingana?